Rudzi: SDA, Driving
Dzidzisa iyo teapot nzira yekukodzera mushe mukutendeuka kwemakanika + Yeuka, kutendeuka kuri mune yechipiri giya. (kashoma pane wechitatu, kana mukana wacho uri munyoro). Izvo zvinodikanwa kuputsa uye chinja kune yechipiri giya PASI pe ...
Chii chinonzi reverse movement, ndeyei? Kudzoserwa. Izvi zvinoreva kumashure nekudzoka kuitira kuti isashande zvakanangana. kutanga nenzira imwe. ipapo kune imwe Kana iyo yekumashure iri yekumashure ...
Kupesana pakati pematikiti Ndeapi matikiti epasi? Anodiwa, mumufananidzo wemubvunzo 8-13, chiratidzo chePRESCRIBING "Yakananga kumberi" (Traffic mitemo yeRussian Federation, Appendikisi 1. Migwagwa. 4. Zviratidzo zvinomanikidzwa, sign 4.1). Uye mu ...
Nezve mabhureki pane echinyorwa kutapurirana ...
About akamedura pamusoro Chinyorwa hutachiwana ... Ungangove, paunenge uchisimudza mabhureki, iwe waive wakabatirira maviri emipendero, asi kwete batira uye gasi, asi batira nemabhureki. Iwe unonyora zvese nenzira kwayo ...
Yekumhanyisa muganho chiratidzo chechokwadi nzvimbo !!! Chibvumirano chinoshanda kusvika pamharadzano iripedyo, yakatarwa nemharadzano yechiratidzo, uye muSettlement kuenda kumharadzano (kunyangwe isina chiratidzo). Pane iyo yechipiri poindi, panofanirwa kuve nezviratidzo pa ...
"Yadhi" inzira yekutakura maererano nemirau yemigwagwa? "Yadhi" inzira yekutakura maererano nemirau yemigwagwa?
"Yadhi" inzira yekutakura maererano nemirau yemigwagwa? "Yadhi" inzira yekutakura maererano nemirau yemigwagwa? Aihwa. Yadhi, maererano nechikamu 1.2 cheSADA, ndiyo nharaunda iri pedyo. Kunyangwe paine ...
Mubvunzo kuvadikani vevat, ndiudze kana mupurisa wemumugwagwa akamisa mota pasina chikonzero, semuenzaniso, vanogona kutarisa magwaro chete kana vachiita basa, havana chikonzero kunze kwepositi yakamira asi pa ...
huremu hunobvumidzwa hwepamusoro hwemotokari hunoyerwa kana mota ikatakurwa? kana kwete? Inobvumidzwa huwandu hwepamusoro Inobvumidzwa huwandu hwakawanda hwemotokari yakarongedzwa ine nhumbi, mutyairi uye vafambi, yakagadzwa nemugadziri se ...
maonero ako: ndeipi iri nani otomatiki kana manyore kutapurirana ??? Kana iyo ACKP ikangoerekana yamira, saka haigone kudhonzwa, ingori mota yekudhonza ndiyo inogona kudaidzwa, nekuti iri nyore kwazvo mumigwagwa yemotokari - gasi - ...
Tsanangura zvine mukurumbira chii chinonzi "UNON-PUBLIC mugwagwa"?
Tsanangura zvine mukurumbira chii chinonzi "UNON-PUBLIC mugwagwa"? akasiyana matekinoroji ndima kuburikidza nenharaunda yemafekitori, matura, nezvimwe ... kazhinji, migwagwa, driveways munzvimbo dzinopindwa nevanopinda kunze ... vamwe vanogona kushanda ipapo ...
Zvinoita here kuti ubate pamharadzano? Mune zviitiko zvipi zvinokwanisika, mune izvo zvisingaiti? pasi pemitemo mitsva hazvigoneke kutora zvachose pasi pemitemo mitsva. kufambisa kunogamuchirwa kunoitwa kutarisira. ndokuti, kumberi ...
Tsanangura chiratidzo uye mutemo Kana chisiri chakavanzika - kodzero dzakatengwa? Kana chena pabhuruu - kumhanyisa muganho unosvika 60 km / h Kana nhema nhema - kusvika ku80 km / h Zvinosiyana nemhando ...
Mubvunzo pane pp. 2.1.1 Mitemo yemumigwagwa yeRussian Federation Tumira kuti uongororwe mu / u, mutemo weCTP, magwaro ekunyoresa emota. 2.1.1. Iva newe uye, pakukumbira kwemapurisa, uvape kuti vaongororwe: mutyairi ...
Kana kutyorwa kwekukurumidza kwakabatwa pakamera, iyo faindi yakaonekwa nekukurumidza sei mudhatabhesi pane webhusaiti yemapurisa emigwagwa? avo vane mavhidhiyo makamera akamira akamisikidzwa kumabhiriji, shanduko, zvinyorwa - chiziviso chinouya kubva pamazuva matatu kusvika gumi, uye ...
Iyo ATV inobvumidzwa mumigwagwa yeruzhinji here? Verenga iyo traffic traffic uye yekushandisa mirairo, zvese zvakanyorwa ipapo. kana yakagadzirirwa nemidziyo yekuvhenekesa inodikanwa senge masaini ekutendeuka, nezvimwe, ipapo unogona ...
chii chinoitika kana ukasabhadhara faindi nenguva? Gore rakapera zvakaitika kumurume wangu. Iye (asingazive nharaunda) akashanduka kuita nzira-nzira, yekumashure nzira munzvimbo yekugara, metres ...
12,5 chikamu 3,1 coap. Mazuva gumi nemashanu ekuputsa zvakapetwa. Ichokwadi here? Ndokumbira utarise kumitemo Chinyorwa 15. Kutyaira pamberi pekutadza kushanda kana mamiriro ezvinhu ari pasi pekushanda kwemotokari ...
une makore mangani kutyaira mota muUSA ??? Vanenge vese maAmerican vanopfuura makore gumi nematanhatu vane kodzero. Sangano rakasarudzika rehurumende Bureau yeMota Mota (BMV), iyo ine ...
iyo U-kutendeuka pamharadzano yakagadziriswa Chete kubva pakati, sezvo U-kutendeuka kwakafanana nekutendeuka, asi pakona pakakwirira, hautendeuki kuruboshwe usati wasvika pakati Chete ...
GKU "TsBDDMO". Chii chinonzi iri sangano uye rinoitei?
GKU "TsBDDMO". Chii chinonzi iri sangano uye rinoitei? iwe unogona kuverenga chirevo chaicho Pamusoro pekusikwa kwenzvimbo yehupfumi yenyika yenharaunda yeMoscow Traffic Safety Center yeMoscow Dunhu Pfupi: 15.03.2012/10/01 XNUMX:XNUMX ...
Mibvunzo ye52 mu database yakagadzirwa mu 0,443 masekondi.